Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Balaadhan oo Jaaliyaadka S.ogadenia Ee Aduunka Uqabsoomay.
Kulan Balaadhan oo Jaaliyaadka S.ogadenia Ee Aduunka Uqabsoomay.
Posted by Dulmane	/ October 30, 2017
Shalay oo Axad ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 29/10/17 waxaa kulamadoodii xidhiidhka ahaa qabsaday Hogaanka Arimaha Abaabulka iyo Jaaliyadaha HAAJ, kuwaas oo bilihii udambeeyay kukulmayay khadka isgaadhsiinta.
Kulanka oo uu shir gudoominayay Gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arimamaha Jaaliyaadka mudane Maxamed Rashiid Sh Cabdulaahi ayaa lagu matri qaaday qaar kamid ah madaxda Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia.
Ugu horaynba Hogaanka ayaa kulanka kufuray khudbad dheer oo uu kaga warbixiyay shaqada hogaanka iyo guud ahaan jaaliyaadka Soomaalida Ogadenia iyo howlihii ugu dambeeyay ee uqabsoomay.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiye kuxigeenka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogdadenia Mudane Dr Maxamed Ismaaciil Cumar, wuxuuna gudoomiyuhu mas’uuliyiinta lawadaagay marxalada dhabta ah ee wadamada geeska Africa gaar ahaan wadanka sii burburaya ee Itoobiya.
Gudoomiye kuxigeenka JWXO Dr Maxamed Ismaaciil ayaa sidoo kale hogaamada Jaaliyaadka kuwargaliyay in ay udiyaar garoobaan lajaan qaadida marxalada kala guurka ah ee Gobolka iyo xornimada dhulka Ogadenia ee naas keentay.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Arimaha Dhaqaalaha ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia Drs Cibaado Xirsi Mahad, waxayna Marwo Cibaado siqoto dheer uga hadashay arimaha dhaqaalaha iyadoo mas’uuliyiinta Jaaliyaadka usoo gudbisay shax cusub oo ladoonayo in lagu kobciyo dhaqaalaha kasoo xarooda xubnaha JWXO.
Drs Cibaado ayaa sidoo kale xubnaha kuguubaabisay in fadhiga laga kaco oo loo istaago hanashada xoriyada Ogadenia oo soo carfaysa, waxayna Drs Cibaado sheegtay in aan rag iyo dumarba lookala hadhin.
Intaas kadib waxaa hadalka lawareegay madaxda Jaaliyaadka 5ta qaaradood kuwaas oo soo gudbiyay talooyin iyo fikiro saliim iyo waliba su’aalo laxidhiidha qodobadii ay madaxdu kahadashay.
Madaxda kulanka soo xaadirtay ayaa dhankooda si hufan uga jawaabay dhamaan su’aalihii waxayna sidoo kale bogaadiyeen fikiradii qaaliga ahaa ee madaxda Jaaliyaadka.
Gabagabadii kulankii shalay ayaa kusoo dhamaaday jawi dagan iyo is afgarad waxayna xubnuhu balan qaadeen fulinta balamada ay qaadeen.